ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့အဖွဲ့၀င်တွေကို ကူညီနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု | Mycanvas
ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့အဖွဲ့၀င်တွေကို ကူညီနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု
ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းဆိုတာ သင်ကိုယ်သင်ကြည့်ကောင်းစေဖို့ သင်တစ်ီဥးတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရှာဖွေခြင်းကို မဆိုလိုပါဟု နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်း၏ တပ်မှူးဟောင်း Chris Hadfield က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ထူးချွန်သောခေါင်းဆောင်မှုသည် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများကို ထူထောင်ခြင်း၊ သူတို့ကိုယုံကြည်ခြင်း၊ သူတို့ကို ခွန်အားဖြစ်စေခြင်းနှင့် သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများကို ပံ့ပိုးကူညီနိုင်စေခြင်းဖြင့် အဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းများဆိုသည်ထက် ပိုမိုအရေးပါလာစေရန်ဖြစ်သည်။
1. ပွင့်လင်းရိုးသားသော ဆက်ဆံရေးကို မွေးမြူပါ။
ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာ ပွင့်လင်းမှုနှင့် ရိုးသားမှုကို အားပေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။ အဖွဲ့ဝင်တွေကို သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကို မျှဝေဖို့ တိုက်တွန်းပါ။ သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ အတားအဆီးတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးပြီး သုံးသပ်ချက်တွေ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် သေချာရှင်းလင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။
2. ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပန်းတိုင်များ ဖန်တီးပါ။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် အသင်းသည် ပန်းတိုင်များသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် မိမိတို့အဖွဲ့၏အောင်မြင်မှုကိုရရှိရန် အချင်းချင်း လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး အတူပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီပါသည်။ခေါင်းဆောင်များသည်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်တွင် အဖွဲ့အား အသိအမှတ်ပြု ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
3. အောင်မြင်မှုကို ဂုဏ်ပြုပါ။
အကြံကောင်းများ သို့မဟုတ် ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီသောအခါ ချီးကျူးဖို့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့။ သင့်အဖွဲ့၏အောင်မြင်မှုတိုင်းအတွက် ခေါင်းဆောင်တစ်‌ယောက် အနေနဲ့ သင့်အဖွဲ့ကို ဂုဏ်ပြုရန် စီစဉ်ဆုံးဖြတ်ပြီး အတူတကွ ဂုဏ်ပြုပါ။
4. အသင်းသားများကို ပြဿနာဖြေရှင်းခွင့်ပေးပါ။
ပြဿနာအတွက် ဖြေရှင်းချက်တွေကို ချမှတ်မယ့်အစား အဖွဲ့၀င်တွေကို အကြံဉာဏ်ထုတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်တွေကို ရယူဖို့ တိုက်တွန်းပါ။ သင့်အဖွဲ့အား မှန်ကန်သောအဖြေကိုရှာဖွေပြီး သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်များကို ပြောပြရန် နေရာပေးခြင်းဖြင့် အဖွဲ့ဝင်တို့၏ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
5. လုံလောက်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် လေ့ကျင့်ရေးများ ပံ့ပိုးပါ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်သည် အဖွဲ့၀င်များကို လက်ရှိအလုပ်အတွက် ကူညီရုံသာမက အဖွဲ့ဝင်တို့၏ တိုးတက်မှုအတွက် ကူညီပေးခြင်းဖြင့် သူတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုများကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အဖွဲ့ဝင်တို့ကိုနောက်တစ်ဆင့်သို့ တက်လှမ်းရန် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များနှင့် လေ့ကျင့်မှုများကို ပေးခြင်းဖြင့် သင့်အဖွဲ့အား ပံ့ပိုးကူညီပါ။
6. ကိုယ့်ကိုကိုယ် တာဝန်ခံပါ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သင့်လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းဟာ အမြဲတမ်း ချောမွေ့နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ဆောင်မှုတွေ မှားသွားတဲ့အခါ၊ ပရောဂျက်တစ်ခု လမ်းကြောင်းလွဲသွားတဲ့အခါ၊ မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ သင် ဒါကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုရှိပြီး ပြဿနာများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် ပန်းတိုင်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် သင့်အဖွဲ့နှင့် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ပါ။
7. အဝေးကို မျှော်ကြည့်ပါ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင်သည် သင်လုပ်ဆောင်နေသော ကြီးမားသောပန်းတိုင်များနှင့် သင်ပါဝင်ကူညီပုံတို့ကို မျက်ခြေမပြတ်ဘဲ သင့်အဖွဲ့၏ နေ့စဉ်အလုပ်များကို ပြီးမြောက်ကြောင်း သေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာ ဟန်ချက်ညီစေတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ယောက်က ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကို လေ့လာထားဖို့ လိုပါတယ်။
စာရေးဆရာ Simon Sinek သည် စာနာမှုသည် “ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ ကိရိယာသေတ္တာထဲတွင် အရေးကြီးဆုံးသောကိရိယာ”ဖြစ်တယ်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည် ။ “အားလုံးအဆင်ပြေရဲ့လား” လို့ ရိုးရိုးလေးမေးခြင်းဖြင့် သင်က အဖွဲ့ဝင်ကို ဂရုစိုက်ကြောင်း ပြသပြီး အဖွဲ့နှင့်သင့်ကြား ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရန် ကူညီပေးသည်။
9. တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ပါ။
အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ချင်းနှင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းသည် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအတွက် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးစီတိုင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုးတက်မှုအတွက် သူတို့၏ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရလာဒ်ကောင်းများ ရရှိခြင်းမှ ပိတ်ပင်ထားသည့် ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး သင့်အဖွဲ့သားများ ပြောသည်ကို နားထောင်ပြီး အကြံဥာဏ်များ ပံ့ပိုးပေးရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပါ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်သည် အဖွဲ့၀င်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့၀င်များကို လေးစားကြောင်း နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ပြသကြသည်။ အမှားများကို ဝန်ခံရန် သို့မဟုတ် စွန့်စားရန် မကြောက်ကြပေ။ စာနာမှု၊ ကရုဏာနှင့် ယုံကြည်မှုတို့မှတဆင့် လေးစားမှုရရှိကြောင်း သူတို့နားလည်သည်။